China Yakamiswa Sisitimu FUT Ceiling Grid fekitori uye Vagadziri | Beihua
Yakamiswa System FUT Ceiling Grid
1. Iyo gomba rechicheka ine hunhu hwekunyoro-chiratidzo, anti-kutu uye isiri kupera.
2. Iyo ine yakanyanya kujeka, iyo huru / muchinjiko tee yakanyatsoenderana, uye kubatana kwacho kwakasimba.
3. Iyo ine yakasimba kubereka kugona, isina deformation kana kupaza.
4. Iko kuiswa kunokurumidza, kunochengetedza nguva yekuisa uye kuderedza mari yekushanda.
Iyo yakazara yakazara yegadziriro yedenga yedenga inoumbwa neiyi huru tee, yakareba muchinjiko tee, pfupi yemuchinjiko tee uye yemadziro angle. Iyo huru tee ndiyo yakakosha danda reiyo denga system. Kureba kweiyo main tee kunowanzoita makumi masere nemasere kana gumi nemaviri pakureba. Iyo yakareba muchinjiko tee kana ipfupi yemuchinjiko tee yakabatanidzwa kune iyo huru tee kuburikidza nemapulagi pamativi ese maviri ayo, nekudaro kupatsanura chirongwa chedenga rese mumakiromita akawanda emawere akaenzana. Iyo inoshandiswa pakuisa siling yezviyero zvematare edenga senge mineral wool board, pvc gypsum board, aluminium ceiling, nezvimwewo, uye inotamba inotsigira uye yekushongedza basa muhurongwa hwese ceiling.
1. Basa rekugamuchirwa rakakosha rinofanira kupedzwa kusati kwavakwa pepa skeleton uye gypsum chifukidzo chekati yemadziro. Kuiswa kweiyo jasi chifukidziro chekuvhara kunofanirwa kuitirwa mushure mekunge padenga, denga uye kuiswa pamadziro kwapera.
2. Dhizaini inodikanwa kana rusvingo rwekamuri rune mabhandi epasi pepasi, kuvakwa kwemabhandi epasi pepasi kunofanira kupedzwa uye kusvika pamwero wekugadzira usati waisa skeleton yependi.
3. Zvinoenderana nekugadzirwa, dhizaini yekuvaka uye chirongwa chezvinhu, tarisa zvese zvigadzirwa zvemadziro ezvigadziriso uye zviite zvakakwana.
4. Zvese zvinoshandiswa zvinofanirwa kunge zvine zvinyorwa zvekuongorora zvinyorwa uye zvitupa.
Mumakore achangobva kupfuura, yakashandiswa zvakanyanya mumahotera, zvivakwa zveumisheni, zviteshi zvevatakuri, zviteshi, dzimba dzemitambo, dzimba dzekushambadzira, mafekitori, zvivakwa zvehofisi, kuvandudzwa kwezvivakwa zvekare, kushongedzwa kwemukati, matenga uye dzimwe nzvimbo.
Yepfuura: Yakamiswa System White Ceiling Grid
Inotevera: Yakamiswa System Yakadzika Ceiling Grid
Yakasimbiswa Fibheri Yegirazi Kudhira Tile